Warshada Muraayada, Farshaxanka iyo Farshaxanka alaab-qeybiyaha-SHUNDA - Muraayada, Farshaxanka iyo Farshaxanka Warshada Iibiyaha-SHUNDA
SHUNDA Crafts waa wax-soo-saarka, dhoofinta, iyo bixinta dhammaan noocyada kala duwan Muraayad (Muraayada Muraayadaha, Muraayada Dayaxa, Muraayada Shelf leh, Muraayada Qaabka Birta, iwm) Farsamada alwaaxa (Shalf alwaax ah, Qolka gidaarka alwaax, Shelf sabayn alwaax ah, sanduuqa baakadaha alwaax, sanduuqa alwaax, iwm) Farsamada birta (Qalfad bir ah, Shelf bir ah, Basket Miraha birta, Qabta Midhaha Birta, Xajista Cadka Birta, iwm) Farsamada Quraarada ( Dhalo quraarad ah, Dhalo cadar, iwm) , Farsamada Resin-ka iyo qurxinta dhoobada ama hadiyadaha loogu talagalay Christmas, Halloween, Easter iyo Valentine iyo wixii la mid ah. Sannado badan oo waayo-aragnimo iyo dadaal ah, waxaan u horumarinay qurxinta guriga silsilad sahayda warshadaha, iyo suuqgeyn si nidaamsan silsilad warshadaha, oo ay ku jiraan muraayad, shelf, nalalka iyo alaabta la xidhiidha. Oo waxaan leenahay nidaam maarayn tayo adag oo dhamaystiran si loo xakameeyo tallaabo kasta laga bilaabo alaabta, muunado, wax soo saarka, baakaynta ilaa shixnadda si loo hubiyo in alaabta kasta si fiican.
Waxaan ku adkeysaneynaa mabda'a macaamiisha marka hore, tayada ugu horeysa, qiimaha ugu fiican iyo adeegga. Waxaana rajeyneynaa inaan kula sameyno xiriir ganacsi oo dheer.
Waxaan leenahay kanaalada silsiladda sahayda xooggan iyo khad wax soo saar oo qumman, kaas oo dabooli kara noocyada kala duwan ee baahiyaha macaamiisha.
Waxaan leenahay koox sare oo naqshadeeyayaasha, awoodaha horumarinta alaabta super, tignoolajiyada wax soo saarka sare leh, kooxda iibka xirfadeed si ay u siiyaan macaamiisha xal adeegga hal-joojin.
Waqtigan xaadirka ah, waxaan iskaashi qoto dheer la leenahay kumanaan shirkadood oo tayo sare leh oo gudaha iyo dibadda ah. 80% alaabtayada waa la dhoofiyaa. Qof kasta oo SHUNDA ah waxa uu kuu ballan qaadayaa xaalad wanaagsan oo leh xirfad, daacadnimo, iyo hufnaan sare. Waxaan aaminsanahay inaan noqon doono lammaanahaaga lagu kalsoonaan karo mustaqbalka.
Dhoofinta waxaan sidoo kale ku leenahay kooxda ganacsiga xirfadlayaasha ah iyo kooxda R&D had iyo jeer adeegaaga. Waxaan bixinaa adeeg dammaanad ah oo loogu talagalay gadashada, habaynta iyo habaynta rarida alaabta. Waxa aanu shixnadda ku samaynaa qiimaha ugu hooseeya, wakhtiga ugu gaaban iyo gaadiidka ugu badbaadsan. Ku qanacsanaantaadu waa awoodayada iyo goosashadayada ugu weyn!
Shunda Crafts Mission: Nakhshad hal abuur leh, alaab tayo sare leh, Adeegga ugu Wanaagsan, Shunda ayaa noqon doonta doorashadaada ugu fiican.